03 | janvier | 2020 | InfoKmada
Fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao: miisa 255 ireo niditra tao amin’ny HJRA
InfoKmada - 3 janvier 2020 0
Nahitana fihenana raha oharina tamin’ny taona lasa ny isan’ireo olona niditra tetsy amin’ny Hopitaly HJRA tamin’ny fetin’ny faran’ny taona sy taom-baovao teo. Ny accident à responsabilité civil no maro an’isa tamin’izany izay nahatratra 96.
Fihotsahan’ny tany : tokony ho mailo ny rehetra
Tranga hita matetika mandritra ny vanim-potoan’ny fahavaratra tahaka izao ny fihotsahan’ny tany. Manoloana izany efa nisy ny fandraisana andraikitra nataon’ny teo anivon’ny BNGRC ho an’ireo toerana mety hitrangan’izany.
HCC : volavolan-dalàna 6 mbola miandry fankatoavana
Volavolan-dalàna enina no mbola miandry ny fankatoavan’ny fitsarana avo momban’ny lalam-panorenana ankehitriny. Isan’izany ny lalàna laharana faha 2019 tsipika aotra aotra valo mifehy ny ady amin’ny herisetra. Ny andinindininy mahakasika izay.
« Mercure » sandoka : olona 2 no voasambotra
Lehilahy miisa 02 no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny CSP Alasora ny alatsinainy faha 30 desambra 2019 lasa teo rehefa avy nisoloky olona mpivady tamina merikiora sandoka. Fantatra fa ny volana oktobra 2019 no nisy lehilahy lehibe 01 milaza ho manana merikiora milanja 03 kilao tao Ambositra ary mitady olona hividy izany.
2020 : handrasana ny fanendrena ny governemanta vaovao
Andro vitsy sisa no isaina, mialohan’ny hanaovan’ireo mpikambana 22 eo anivon’ny governemanta ankehitriny ny tatitr’izay erin-taona niasana izay. Handrasana ny fisian’ny mpikambana vaovao ao anatin’izany governemanta izany amin’ity taona 2020 ity.
Tohin’ilay raharaha teny Ivato izay namoizana ain’olona vokatry ny tifitra nataona Zandary, nitondra fanazavana ny solotenan’ny fianakaviana sy ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Iraisan’ny rehetra ny hoe : tsy maintsy hampiharina ny lalàna ka ho saziana araka izany ireo nihoa-pefy. Ny solotenan’ny fianakaviana izay nanamafy fa tokony hisy ny fijerena akaiky azy ireo.